फेसबुक संसार:जोड्ने भन्दा तोड्ने खतरा !| Nepal Pati
नेकपा स्थायी कमिटी बैठक दुई दिनका लागि स्थगित
थप ४७३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या १४ हजार ५ सय १९ पुग्यो
राष्ट्रपतिसँग भेटेर बालुवाटार फर्किए प्रचण्ड
कोरोना कहरबीच सरकारले खुला गर्‍यो श्रम स्वीकृति
संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णय
राष्ट्रपतिसँग ४० मिनेटको परामर्श लिदैं प्रधानमन्त्री बालुवाटार फर्किए
फेसबुक संसार:जोड्ने भन्दा तोड्ने खतरा !
आइतवार, मंसिर २९, २०७६
काठमाडौं । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग भन्दा दुरुपयोग बढ्दो छ । सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोगले घरबार विहिन मात्र हैन मानसिक रोगले ग्रस्त हुनु पर्ने समस्या पनि उत्तिकै बढिरहेका छन । इन्टरनेटको आविस्कारसँगै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, म्यासेन्जर,इमाे, भाइबर, इन्स्ट्राग्राम, ट्वीटर लगायतका सामाजिक सञ्जाल प्रयोग कर्ताहरु बढिरहेका छन । यसको सदुपयोग गर्दै गर्दा व्यक्ती र समाजले ठूलाे मूल्य चुकाएका अनगिन्ती घटनाहरु सुन्नमा आइरहेका छन ।प्रबिधिको सहि सदूपयोग गर्न चुकेको पछिल्लो पुस्ता प्रबिधिकै कारण ठूलो समस्यामा परिरहेको देखिन्छ । सकारात्मकतामा भन्दा नकारात्मकतामा रमाएकाे पछिल्लाे पुस्ताकाे अम्मल बनिसकेकाे सामाजिक सञ्जालको सदूपयाेग कसरी गर्न सकिन्छ वा गर्नु पर्छ भन्ने अह्म सवालकाे बारेमा वहस गर्न ढिला हुँदैछ ।
फेसबुकमा चिनेका भन्दा नचिनेका, नजिकका भन्दा टाढाका अपरिचित व्यक्तिहरु साथी बनाउने फेसबुक स्टाटस लेख्ने लाइक कमेन्ट गर्दै, कुराकानी गर्ने अन्तिममा भेट्ने लगायतका कुराहरु गर्दै नविन समस्यामा फस्नेहरुकाे सख्या बढ्दै गइरहेको पाइन्छ । यस्ता समस्याहरु शहरबाट गाउँ तिर फैलनमा रुची देखाएकाे पाइन्छ । जसकाे कारण थुप्रै शिक्षित ,अशिक्षित मानिसहरु यसका सिकारहरु बन्दै गइरहेका छन ।
यस्ता घटनाका पीडितहरु पछिल्लो पटक खुल्दै गइरहेका छन । पंक्तिकार शुक्रबारको दिन अफिस जाँदै गर्दा सार्वजनिक यातायातमा सुनेकाे एउटा राेचक सन्दर्भ पस्कन अनुमति माग्दछु। अरु दिन जस्तो बसमा यात्रुहरुको खासै भिड थिएन । म पछाडीको सिटमा गएर बसें । मेरो अगाडिकाे सिटमा एक किशोर र एक किशोरी बसिरहेका थिए । उनीहरु एक आपसमा गफिदैं थिए । उनीहरुको गफ रोचक अनि संवदेदनशिल समेत रहेकाे थियाे। ब्लक गरिसकेकाे फेसबुकको पासवर्ड कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ ? केटिले केटालाई सोध्दै भनिन । किन के भयो र ? केटाले प्रतिप्रश्न गरे । केटीले आफ्नो समस्या यसरी व्यक्त गरिन् ।
फेसबुकले मलाई लास्टै तनाब दियो । के तनाब भनन केटाले फेरी प्रश्न गरे । केटिले जवाफ दिदै भनिन् अष्ट्रेलिया बस्ने केटासँग भर्खर मेरो इन्गेजमेन्ट सम्पन्न भयो । केटा उतै बस्छ । इन्गेजमेन्ट पछि केटा अष्ट्रेलिया फर्किसकेको छ । मेरो इन्गेजमेन्ट पछि मैले त्यो केटा र मेरो फोटाे फेसबुकमा राखेको थिएँ । मेरो फेसबुकको पासवर्ड अर्काे केटासँग पनि थियो । जुन केटासँग मेरो इन्गेजमेन्ट भयो उसँग पासवर्ड भएको केटा पनि मिउचल फ्रेन्ड रहेछ । त्यो केटाले मेरो इन्गेजमेन्ट भएको थाहा पाएपछि मेरो र उसँगै बसेकाे पूरानाे फोटाे राखेर मेरै आइडीबाट बधाई दियो । फाेटाे अपलाेड भएसँगै घरका मानिसले मलाई के गरेको यस्तो ? तिम्राे विवाहकाे मिति समेत तय भइसकेकाे छ । केटा र उसकाे परिवारले यसलाई कसरी लिन्छन् हाेला ? तुरुन्त त्याे फाेटाे डिलिट गरिहाल ! आफ्नो आइडीको पासवर्ड जथाभावी दिएको सजाय मैले भोग्दै गर्दा परिवारलाई सत्य तथ्य बताउन समेत सकिन । तत्काल पासवर्ड चेन्ज गर्ने कोशिस गर्दा सफल पनि भइन । रिसमा आफ्नो आइडी आफैले ब्लक गरिदिए । हुनेवाला बुढाले किन आइडी ब्लक गरेको भन्दै हैरान पारिसक्याे ।
अहिलेको केटासँग मैले फेसबु्क बिग्रयो भनेर बहाना गरेकी छु ।हाम्रो भाइबरमा गफ हुन्छ । उनको यी कुरा सुनिरहेका केटाले सुझबुझपूर्ण जवाफ फर्काउँदै भने, तिम्रो जो केटासँग विबाह हुँदैछ ।उसलाई पुरै कुरा भनिदेउ । जसले पछि हुने दुर्घटना न्युनिकरण हुन सक्छ । जीवन जीउने कुरा हो ।तिम्रो विगत र वर्तमान उसले सहज रुपमा जानकारी पाएपछि भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित घटनाहरुबाट बच्न सकिन्छ । यो त एक प्रतिनिधिमुलक घटना मात्रै हो।
पछिल्लो समय नेट इन्टरनेट बिना मान्छे कुरुप जस्तै बन्दैछ । बरु खाना खान बिर्सेला तर फेसबुकका लत लागेका मानिसहरुले फेसबुक बिनाकाे जीवन ब्यर्थ सम्झन थालेका छन । माथिकाे घटनाको कुरा गर्दै गर्दा एलएलबी दोस्रो वर्षमा अपराध पढाउने शिक्षकले कक्षाकोठामा फेसबुकबारे रमाइलो र संवेदनशिल विषयको उठान गरेको पंक्तिकारलाई स्मरण छ । दशैको समयमा आफन्त नातागोताहरु घरमा आएका थिए । उनीहरुले पुरानो पुस्ताहरु जस्तो गरेर भलाकुसाली, सन्चो विसन्चो हैन । घरमा पुग्ने वित्तिकै वाइफाईको पासवर्ड माग्न थाले । वाइफाई कनेक्टपछि सबै जना फरक फरक ठाउँमा गएर त्यसैमा झुम्मिएकाे बताए । फेसबुकले पछिल्लाे पुस्तालाई एकलकाँटे, स्वार्थी,एकान्तप्रेमी,मनाेराेगी बनाउँदै गइरहेकाेले गर्दा सस्कार र परम्परा माथि गम्भीर अतिक्रमण भइरहेको स्मरण समेत गराए ।
पाहुनाहरु घर आउँदा अब त अनिवार्य रुपमा वाइफाई हुनै पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु भनेको विडम्बना हो । यसले व्यक्तिालाई अल्छि मात्रै नभई सृजनशिलता र बौद्धिकतामा समेत कुरुप बनाउँदै गइरहेको छ । नेट इन्टरनेटको गलत प्रयोगका कारण अपराधको जालो विश्वभर फैलिदै गएकाे छ । इन्टरपोलले यसलाई भौतिक वा सामाजिक सस्कृति विरुद्धको कार्य मानेको छ । यो प्राकृतिक सिमा विहिन कार्य भएकोले अपारधीहरु अज्ञात रहँदा अपराधहरु चुलिदै गइरहेका छन ।
साइबर सुरक्षाको मामलामा नेपालमा कानूनी व्यवस्था कमजोर भएका कारण झनै जोखिम रहेको देखिन्छ । विधुतिय अपराधका मुद्धा जिल्ला अदालत काठमाडौंले मात्रै साइबर अपराधको घटना हेर्छ भने सिआइबी र साइबर सेलले साइबर घटनाका उजुरीउपर अनुसन्धान गर्छन् । तर साइबर सुरक्षाका लागि छुटटै सांगठिनक संरचना नहुँदा झनै जाेखिम बढेकाे छ। नेपालको विद्युतीय कारोबार ऐन-२०६३ (१) ले “कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूमा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्री वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने लगायतका कामलाई विद्युतीय कसुर” भनी परिभाषा गरेको छ ।
इन्टरनेटको प्रयोग मार्फत गरिने चरित्र हत्या, हिंसा फैलाउने कार्य, यौनजन्य हिंसा, इन्टरनेट धोकाधडी, अर्काको पहिचान अनधिकृत रूपमा प्रयोग, क्रेडिट कार्ड तथा एकाउन्ट आदिको चोरी गरी गरिने बैंकिङ कसुर, अर्काको कम्प्युटर, विद्युतीय उपकरण तथा नेटवर्कमा पुर्याउने क्षति लगायत अवैधानिक कार्यलाई पनि साइबर अपराध मानिन्छ भनि परिभाषित गरेको छ । नेपालमा प्रहरीले साइबर अपराधको नियमनका लागि विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को प्रयोग गदै आएको छ । उक्त ऐनको दफा ४७ नेपालमा हुने साइबर अपराध रोक्न सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने र सबैभन्दा बढी विवादित दफा हो । यस दफाले कम्प्यूटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुमा नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री, कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गरे दोषीलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
महानगरीय अपराध महाशाखामा चालू आर्थिक वर्षमा साइबर अपराध सम्बन्धी एक हजार ५७० उजुरी दर्ता भएका छन्। महाशाखाका अनुसार युवावर्ग बढी सङ्ख्यामा साइबर अपराधमा संलग्न भएको देखाउँछ । जसमध्ये १० देखि २० वर्ष उमेर समूहका २२ दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत, २० देखि ३० वर्ष उमेर समूहका ३९ दशमलव ९२ प्रतिशत, ३० देखि ४० वर्ष उमेर समूहका २९ दशमलव ९१ प्रतिशत र ४० देखि ६० वर्ष उमेर समूहका सात दशमलव ९८ प्रतिशत व्यक्ति साइबर अपराधमा लागेका छन ।
माथिका तमाम सन्दर्भ, तथ्याङ्क,कानूनी व्यवस्था र जनताको चेतनास्तरलाई हेर्दा मुलुकमा आगामी दिन झनै विकराल बन्दै जाने देखिन्छ । संसारको जुनसुकै कुनामा निर्मित कुनै पनि सामान विना रोकतोक मुलुक प्रवेश गरिरहेको समयमा सरकारले नियमन गर्न थप जनशक्ति, प्रविधि, कानून र व्यवहारिक ज्ञान मुलुकबासी सामू पुर्याउन जरुरी देखिन्छ । राज्यले आफ्ना नागरिकलाई भविष्यमा आउन सक्ने समस्याहरुलाई सुसुचित र न्यूनिकरण गर्न आम जनतासँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न समयमै सजग हुनु अनिवार्य भइसकेको छ । जसले आगामी दिनमा हुने दुर्घटना,क्षती र समयको बर्बादीलाई रोक्ने छ ।
विभाजित छ नेपाली राष्ट्रियता
कोरोनासँगै नेपालमा “राष्ट्रियता”पनि तातेको छ । जसर...
चक्रव्यूहमा फसेको राजीनामा !
मुलुकको राजनीति यति बेला प्रधानमन्त्री र नेकपाको व...
विक्षिप्त मोदी मिडिया !
भारत अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधूरा, लिपुलेक र कालापा...
किन हुँदैन त एमसीसीको विरोध ?
यतिखेर नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीस...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले संसदकाे वर्...
कोरोना अपडेट : उपचारपश्चात घर फर्किनेको संख्या ६० लाख २८ हजार नाघ्यो
काठमाडौं । विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरसका कारण पछिल्लो २४ घन्टामा संयुक्त र...
पार्टी एकता बचाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई मन्त्रीहरुको सुझाव
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मन्त्रीहरुले कुनै पनि हालतमा पार्टी ए...
कोरोना अपडेट : उपचारपश्चात निको हुनेको संख्या करिब ५८ लाख पुग्यो
काठमाडौं । विश्वयापी महामारी कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या विश्वमा १ करोड ५ लाख...
एमाले दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन
काठमाडौं । निर्वाचनमा आयोगमा एमाले दल दर्ताका लागि निवेदन परेको छ । झापाकी सन्ध्...
थप एक जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु,मृत्यु हुनेकाे संख्या २८ पुग्याे
भारत अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधूरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेट्दै गत जेठ ३ गते नेप...
मुलुकको राजनीति यति बेला प्रधानमन्त्री र नेकपाको वरिपरि घुमिरहेको छ । यसै समयमा ...